Hatramin'izao dia heverina ho fomba mahomby sy azo itokisana ny fomba hontainan'ny hormona. Soa ihany fa ny fanafody voalohany izay nitondra fiovana goavana teo amin'ny rafi-pitsaboana hormonina ary nitarika ho an'ny lanjany mihoatra noho ny teo aloha. Ankehitriny dia mihasarotra hatrany ny zava-mahadomelina hormona. Na izany aza, hatramin'izao dia manana lisitra lehibe amin'ny vokatra hafa izy ireo.
Ireo karazana hormonina fanabeazana aina
Raha miresaka momba ireo karazana hetra fihinanana fanafoanana hormona, dia tokony homarihina fa amin'izao fotoana dia tena misy safidy manan-karena.
Noho izany, inona no fanabeazana hormonina maoderina?
Takela-bato. Misy ny fanabeazana am-bava sy ny mini-pili. Taorian'ny fandinihana sy ny fanadihadiana dia nanendry azy ireo ny dokotera, satria betsaka ny fanomanana toy izany. Maka fanafody isan'andro, indraindray misy fiatoana isan-kerinandro. Ny fampivelatra dia 99%.
Tsindrona. Ho azy ireo dia mampiasa ny fanafody "Net-En", "Depo-Provera". Ny injections dia vita indray mandeha ao anatin'ny 2-3 volana. Ny fomba fitsaboana dia tsy natao afa-tsy ho an'ireo izay niteraka vehivavy 35 taona mahery. Ny fampivelatra dia 96.5-97%.
Ring "NovaRing". Ny peratra dia napetraka ao amin'ny vagina ary miova indray mandeha isam-bolana, ary tsy miteraka alahelo amin'ny vehivavy na ilay mpiara-miasa. Ny fampivelatra dia 99%.
Ny sarin'ny "Evra". Ny plaster dia mifatotra amin'ny iray amin'ireo faritra azo atao ary miova indray mandeha isan-kerinandro. Mahomby ho an'ny vehivavy 18 ka hatramin'ny 45 taona. Voasarika amin'ny vehivavy mifoka sigara mandritra ny 35 taona. Ny fampivelatra dia 99,4%.
Ny fitsipiky ny asa dia mitovy amin'ny azy rehetra: manelingelina ny fahatsapana sy ny famotsorana ny atody izany, ka mahatonga azy ireo tsy ho vita.
Hetsiky ny fanabeazana hormona
Misy takelaka postcoital, izay natao ho an'ny fampiasana vonjy aina raha toa ka mipoitra ny fimailo, ohatra. Ireo vola ireo dia misakana ny fananganana ny atody sy ny fiononana amin'ny lavaka fananganana tranonjaza, raha efa masaka sy mivaivay.
Ny fanomanana rehetra an'io andian-tantara io dia manimba tanteraka ny hormonal background, miteraka fahasarotana. Ny fampiasana azy matetika dia voarara tanteraka, satria mampidi-doza ny vatany. Ny fahamendrehan'ny fitaovana dia 97%.
Hormonal contraceptive hormone: contraindications
Maro ny tranga ahitana lisitra tsy azo ampiasaina amin'ny fampiasana fanabeazana hormona. Tandremo ny lisitr'ireo tsy fitovizan-kevitra:
ny fitondrana vohoka sy ny fametavetana mandritra ny 6 herinandro aorian'ny fiterahana;
nifoka sigara nandritra ny 35 taona;
AD 180/110 mm Hg sy ambony;
kardia sy voan'ny aretim-po;
Diabetes mellitus misy aretina na maharitra mihoatra ny 20 taona;
Mba hanaovana izany amim-pahamatorana, satria ny fidirana amin'ny hormonal background dia mety manelingelina ny asan'ny rafitra vatana.
Pose du "scissors"
Striptease ao an-trano
Erogenic manondro ny lehilahy
Ny firaisana dia manao firaisana
Tao ny fitiavana: teknolojia ara-pananahana
Dress Rachel Mak Addams eo amin'ny lanonana Oscar-2016
Ny akanjon'ny vehivavy amin'ny sintepone
Boa amin'ny tànana manokana
Katie Holmes nisioka tantara vaovao taorian'ny nisarahany tamin'i Jamie Foxx
Sakafo mofomamy misy menaka - tsotsotra tsotra sy mahazatra amin'ny tsindrin-tsakafo tsara
Ahoana no hamantarana ny fanimbana?
Herintaona izay tsy mitsaha-mitombo izay mamelana amin'ny fahavaratra
Fikalasan-dra amin'ny fivavahan'ny fekal
Ny mainty hoditra amin'ny olon-dehibe - inona no dikan'izany?
Ahoana no hanamafisana tranon-trano?
Ilay boky kely amin'ny tananao
Ahoana no hanadiovana ny karipazy amin'ny soda?
Toeram-pandehanana ara-pahasalamana ho an'ny fasana